Ịkwanye pọmpụ kichin na -ewu ewu n'ahịa ụlọ n'ime afọ asaa ma ọ bụ ọtụtụ afọ gara aga. Ọ na -agbanwe agbanwe ma na -ekpuchi oke sara mbara karịa ọkpọkọ mmiri ọdịnala. Dị ka aha ahụ na -egosi, a na -eji pọmpụ kichin na kichin dabara na sink. Mgbanwe agba nke pọmpụ kichin nwere njikọ chiri anya ...
Mgbidi mgbidi ahụ bụ ili ọkpọ mmiri nke dị na mgbidi ahụ, wee duru mmiri ahụ gaa na efere ịsa ahụ ma ọ bụ ebe a na -esi nri n'okpuru okpuru mmiri ahụ. Mgbidi ahụ kwụụrụ onwe ya, efere ịsa ahụ / sink nwekwara onwe ya. Efere ịsa ahụ ma ọ bụ sink adịghị mkpa ịtụle ngwakọta dị n'ime ya na fau ...
Ọtụtụ ezinụlọ adịghị eji ite mkpofu agbakwunyere wee chee na ihe mkpofu dị na kabinet na -atọ ụtọ. Mana ihe mkpofu ọ na -esi isi na kichin? Ma ọ bụ mgbagha a dabere na ewepụghị ahịhịa ruo otu izu? E wezụga nke ahụ, a na -enwekarị mkpuchi na kabinet. Ihicha oge n'oge ...
Akụrụngwa nke kabinet kichin
A na -ekewa ngwaike kichin kichin n'ime ngwaike bụ isi na ngwaike arụ ọrụ. Nke mbụ bụ aha izugbe ndị otu hinge na okporo ụzọ slide, nke ikpeazụ bụ aha ngwa ngwaike eji eme ihe dị ka akwa nchekwa nkata. Kitchen isi ngwaike isi ngwaike n'ozuzu gụnyere: h ...
Ebe a na -ete enyo
E jiri ya tụnyere efere ịsa mmiri seramiiki ọdịnala, ụdị efere ịsa ahụ a abụghị naanị nwere ọdịdị doro anya kristal na agba na -enwu gbaa, kamakwa nwere ihe doro anya, kristal doro anya na ihe siri ike, nke anaghị adị mfe ịzụlite nje ma nwee uru nke nhicha dị mma. . N'ihi ya, ọ ...
Otu esi ahọrọ Ogwe ịsa mmiri Ionic？
Isi ịsa mmiri ion na -adịghị mma na -ewu ewu na mba ofesi. Ị ma ihe isi mmiri ịsa ahụ na -adịghị mma bụ? Kedu ọrụ pụrụ iche nke isi ịsa mmiri ion na -adịghị mma? Ka m gosi gị ya taa. Mmiri ịsa ahụ adịghị mma bụ ịgbakwunye Maifan okwute, tourmaline na irighiri ion na -adịghị mma na njikwa mbata mmiri ...
Gịnị mere ị ji amasị igwe anaghị agba nchara?
site na nchịkwa na 21-08-26
Ịsa mmiri igwe anaghị agba nchara bụ otu n'ime mmiri ịsa ahụ a na -ejikarị na ndụ anyị kwa ụbọchị. N'ihi na igwe anaghị agba nchara nwere ọtụtụ njirimara, ọtụtụ ezinụlọ dị njikere iji ịsa igwe anaghị agba nchara. Na mgbakwunye, kedu uru ịsa ahụ igwe anaghị agba nchara? Ka anyị kọwaa uru nke igwe anaghị agba nchara ...
Ọdịdị nke ụdị Countertop ọ bụla
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji kabinet ruo ogologo oge, tebụl okpokoro dị ezigbo mkpa! Tebụl kabinet siri ike, na -adịgide adịgide ma mara mma ga -eme ka obi ghara ịdị anyị mma mgbe anyị na -esi nri. Mana ọtụtụ ndị enyi amachaghị ihe dị na tebụl kabinet, ọtụtụ mgbe amaghịkwa etu esi ahọrọ. Taa, ka ...
Nhazi ọkwa nke ọnụ ụzọ kabinet
Ejiri ihe eji ekewa ọnụ ụzọ kabinet: ogwe eji achọ mma, efere a kpụrụ akpụ, efere achịcha agba, ọnụ ụzọ kristal, efere acrylic na efere osisi siri ike. Ogwe eji achọ mma ugboro abụọ, ya bụ, bọọdụ melamine, mkpụrụ ahụ na -abụkarị bọọdụ ururu, elu ya bụ mkpuchi melamine. Uru: t ...
Gịnị mere anyị ji amasị okwute okwute?
Akụkụ ndị bụ isi nke okwute a kpụrụ akpụ bụ ntụ ntụ ntụ na ụrọ. Na isi, ọ bụ nnukwu okwute sintered. Sistemụ mgbasa ozi ton 10000 na -agba ya ọkụ na oke okpomọkụ karịa 1200 ℃. Kedu uru dị na okwute okwute? ① Yiri nguzogide na nguzogide corrosion siri ike Mohs ...
Tụnyere nke dị iche iche kabinet Countertop
Tebụl okpokoro ndị ọzọ na -enwu enwu ma dịkwa ọcha dịka afọ iri. Ma ha bụ tebụl ụcha ọkụ dị na mbara ikuku ma dị mfe ma ọ bụ tebụl agba ọchịchịrị dị jụụ ma mara mma, ihe a na -elekwasị anya bụ ma ha na -eguzogide unyi abụghị ụcha, kama ọ bụ ihe. Site na 2012 ruo 2019, ọtụtụ mmadụ ...
Egbochiri na Moldy na kabinet Kithen
A na -egbochi ọwa mmiri na -esi nri na kichin. A na -egbochi ọkpọkọ ọwa mmiri nke igwe nri kichin, nke bụ nsogbu nkịtị. Mgbe mkpọchi ọkpọkọ mere, a ga -agbarị ya ozugbo, ma ọ bụghị ya, ọ ga -ebute nsị nsị. A na -egbochi ọkpọkọ ọwa mmiri. N'ozuzu, a na -egbochi ikiaka, ya bụ, p ...